Egypt: Axmed Shafiq oo isaga haray tartanka Doorashada Madaxweynaha • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Egypt: Axmed Shafiq oo isaga haray tartanka Doorashada Madaxweynaha
January 8, 2018 - By: Abdirizak Shiino
Axmed Shafiq ayaa ahaa murashaxa ugu muhiimsanaa ee la tartami lahaa Madaxweynaha xilka haya Cabdifatax Al Sisi oo la filayo inuu sanadkan markale ku guuleysto Doorashada Madaxweynaha, inkastoo Al Sisi uusanba weli shaacin inuu xilka u tartami doono.
Shafiq oo hada ah 76 sano jir ayaa horey usoo ahaan jiray Duuliye ciidamada cirka ee Masar, wuxuu sidoo kale noqday Wasiirka Duulimaadka. Sanadkii 2011 xiligii uu dhacayey kacdoonkii looga soo horjeeday Xusni Mubarik ayuu muddo hal bil ah hayey xilka Raysalwasaaraha.
Kadib doorashadii 2012 ayuu Axmed Shafiq u guuray dalka Imaaraadka Carabta halkaasi oo uu sanadihii lasoo dhaafay ku noolaa. Hase yeeshee Imaaraadka ayaa dalkooda ka tarxiilay Axmed Shafiq bishii lasoo dhaafay ee December, maalmo kadib markii uu shaaciyey inuu u tartami doono xilka Madaxweynaha Masar doorashada sanadkan.